आइपिएलमा खेल्नै नपाएका विदेशी खेलाडीहरु | Hamro Khelkud
आइपिएलमा खेल्नै नपाएका विदेशी खेलाडीहरु
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२० को उपाधि मुम्बई इन्डियन्सले जितेको छ । मुम्बईले दिल्ली क्यापिटल्सलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै पाँचौ पटक आइपिएलको उपाधि जित्न सफल भयो ।
कोरोना महामारी पछि सुरु भएको विश्व क्रिकेटकै सर्वाधिक ठूलो प्रतियोगिता आइपिएल थुप्रै बाधा अबरोध पार गर्दै सफल रुपमा सम्पन्न भएको छ । अधिकाम्स खेलाडीले आइपिएलमार्फत मैदानमा पूनरागमन गरे । इतिहासमा पहिलो पटक समर्थक विना आइपिएल हुन पुग्यो ।
आइपिएलमा सबै खेलाडी खेल खेलेर उच्च प्रर्दशन गर्न चाहन्छन् । तर चार मात्रै विदेशी खेलाडी खेल्न पाउने हुँदा टोलीको आवश्यता र सन्तुलनमा ध्यान दिनुपर्ने हुँदा बेन्चमा बस्नुपर्ने हुन्छ । चार मात्र विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने हुँदा केहि चर्चित खेलाडी प्रतियोगिता अवधिभर एक खेल पनि नखेली फर्किनु पर्यो ।
केहि नियमित खेल्ने अपेक्षा गरिएका खेलाडीनै कुनै खेल खेल्न पाएनन् । २०२० को आइपिएलमा १२ विदेशी खेलाडीले कुनैपनि खेल खेल्ने मौका पाएनन् । जसमा चार वेस्टइन्डिजका खेलाडी छन् । नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने मात्र होईन आइपिएल २०२० मा कुनै पनि खेल खेल्ने मौका नपाएका १२ विदेशी खेलाडी यस प्रकार छन् ।
१. सन्दीप लामिछाने (दिल्ली)
दिल्ली क्यापिटलसले नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई कुनै पनि खेलमा मौका दिएन । लिग चरणका कुल १४, प्ले अफमा दुई र फाइनल गरि दिल्लीले १७ खेल एकै सिजनमा खेल्यो । तर सन्दीपले मौका पाउने आशामा पुरै सिजन बेन्चमा बिताए ।
दिल्लीले आफ्नो चार विदेशी खेलाडीमा तीव्र गतिका बलर कागिसो रबाडा, एनरिच नोर्किया, शिम्रन हेटमायर र मार्कस स्टोइनिसलाई निरन्दर खेलाई रह्यो । दिल्लीले एलेक्स केरी र ड्यानियल साम्सलाई तीन तीन खेलमा मौका दिएको थियो । जसमा शिम्रन हेटमायरलाई बेन्चमा राखेर मौका दिएको थियो । अन्य सबै खेलमा एउटै चार विदेशीका खेलाडी खेलाई रह्यो ।
सन्दीप बेन्चमा बस्नुको मुख्य कारण चाहिँ भारतीय तीव्र गतिको बलिङ कमजोर रहनु थियो । जसको कारण नोर्कियालाई रबाडाको जोडीको रुपमा निरन्तर खेलाई रह्यो । दिल्लीले प्ले अफमा अन्तिम खेलमा स्थान पक्का गर्दाअन्य खेलाडीलाई बिश्राम दिएर मौका दिन पाएन ।
२. किमो पल (दिल्ली)
दिल्लीले वेस्टइन्डिजका अलराउन्डर किमो पललाई पनि यस सिजनमा पूरै बेन्चमा राख्यो । कुनैपनि खेलमा मौका दिएन । अलराउन्डरको रुपमा मार्कस स्टोइनिस पूरै खेल खेल्दै निरन्तर उच्च प्रर्दशन गर्दा पलले कुनैपनि खेलमा मौका पाउन सकेनन् । ५० लाख भारतीय रुपैयाँमा अनुबन्ध भएका पल दिल्लीको रोजाईमा पर्न सकेनन् । मध्य गतिमा बलिङ गर्ने पलले तल्लोक्रममा आक्रामक सटको क्षमता राख्ने गर्दछन् ।
३. हार्डस विलोइन (पन्जाब)
दक्षिण अफ्रिकी तीव्र गतिका बलर हार्डसलाई किंग्स इलेभेन पन्जाबले पुरै सिजन बेन्चमा राख्यो । पन्जाबको तीव्र गति बलिङ कमजोर रहेपनि उनले मौका पाउन सकेनन् । पन्जाबले तीव्र गतिमा शेल्डन कटरेल र क्रिस जोर्डनलाई खेलाउँदा जेम्श निशमलाई अलराउन्डरको रुपमा खेलाएको थियो ।
यी तीन खेलाडी मध्य एकले मौका पाएका थिए । ग्लेन म्याक्सवेल र निकोलस पूरन पहिलो रोजाईमा खेले । बलिङमा टोली आवश्यक परेपनि पन्जाबले हार्डसलाई कुनैपनि खेलमा मौका दिएन ।
४. अली खान (कोलकाता)
अमेरिका तीव्र गतिका बलर अली खान पहिलो पटक आइपिएलमा अनुबन्ध भएका थिए । अमेरिकाबाट आइपिएलमा अनुबन्ध हुने पहिलो खेलाडी बनेपनि उनी बेन्चमा बस्नु पर्यो । अली खानलाई कोलकाताले ह्यारी गर्नीको स्थानमा मौका दिएको थियो । तर सुरुवाती समय पुरै बेन्चमा बसेका उनी पछि भने चोटका कारण प्रतियोगितानै गुमाउन पुगे ।
कोलकातामा विदेशी खेलाडीमा उच्च प्रतिस्पर्धा थियो । विश्वस्तरिय खेलाडी ओईन मोर्गन, आन्द्रे रसेल, सुनिल नारायण, प्याट कमिन्स र लोकी फर्गुसन जस्ता खेलाडी हुँदा उनले मौका पाउन सकेनन् । टेष्टका नम्बर वान प्याट कमिन्स र विश्वस्टार लोकी फर्गुसन जस्ता तीव्र गतिका बलर हुँदा खानले मौका पाउन सकेनन् ।
५. टिम सिफर्ट (कोलकाता)
न्युजिल्यान्डका आक्रामक विकेटकिपर ब्याट्सम्यान) टिम सिफर्ट पनि चार विदेशी खेलाडीको रुपमा मौका नपाउने क्रिकेटर हुन् । कोलकातामा घाइते अली खानको स्थानमा आएका सिफर्टले कुनैपनि खेलमा मौका पाउन सकेनन् ।
चार विदेशी खेलाडीमा कोलकाताले मोर्गन, रसेल, कमिन्स र लोकी फर्गुसनलाई खेलाउँदा उनी रोजाईमा परेनन् । विकेटकिपरमा दीनेश कार्तिक हुँदा कोलकाताले उनलाई कुनैपनि खेलमा मौका दिएन ।
६. क्रिस लिन (मुम्बई)
मुम्बईले पाँचौ उपाधि जित्दा अष्ट्रेलिया ओपनर ब्याट्सम्यान क्रिस लिन पुरै सिजनमा डग आउटमै बसेर ताली बजाउनु पर्यो । मुम्बईले ओपनरमा सुरुवात देखिनै दक्षिण अफ्रिकी क्विन्टन डी ककलाई खेलाएका थियो । डी ककले उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेपछि उनको विकल्प खोज्न परेन । चार विदेशी खेलाडीमा मुम्बईले डी कक, ट्रेन्ट बोल्ट, काइरन पोलार्ड, जेम्श प्याटिनसन र नाथन कुल्टर नाइललाई खेलाएको थियो ।
सन् २०१९ मा कोलकाताबाट उच्च प्रर्दशन गरेका लिन पछिल्लो समय राम्रो लयमा पनि थिए । उनलाई यसै अक्सनमा मुम्बईले २ करोड भारतीय रुपैेयाँमा किनेको थियो । तर कुनैपनि खेलमा मौका दिएन । डी कक उत्कृष्ट लयमा हुँदा उनले टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन् । मुम्बई प्ले अफमा तीन खेल अगावै पुगेपनि लिनलाई मौका भने दिएन । ओपनर बाहेक अन्य ठाउँमा भने उनको स्थान थिएन ।
७. शेर्फान रदरफोर्ड (मुम्बई )
वेस्टइन्डिजका युवा अलराउन्डर शेर्फान रदरफोर्ड पनि बेन्चमा तालि बजाएरै च्याम्पियन बनेका छन् । मुम्बईमा अलराउन्डरको रुपमा वेस्टइन्डिजकै काइरन पोलार्ड पहिलो रोजाईमा खेले । पोलार्ड टोलीमा हुँदा रदरफोर्डलाई मुम्बईले कुनैपनि खेलमा मौका दिएन । रदरफोर्ड यसै सिजन दिल्लीबाट खेलाडी साटफेर मार्फत मुम्बई पुगेका थिए ।
८. मिचेल म्याक्लेनाघन (मुम्बई)
न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलर मिचेल म्याक्लेनाघन पनि मुम्बईमा बेन्चमै बसेका छन् । उनले कुनै पनि खेलमा मौका पाउन सकेनन् । मुम्बईले तीव्र गतिमा ट्रेन्ट बोल्टलाई नियमित खेलायो । नाथन कुल्टर नाइल र जेम्स पाटिनसन मध्य एकलाई निरन्तर मौका दियो । बोल्टले लगातार उच्च प्रर्दशन गरेपछि म्याक्लेनाघन पुरै खेलमा बेन्चमा बस्नु पर्यो ।
९. ओशेन थोमस (राजस्थान)
वेस्टइन्डिजका तीव्र गतिका बलर ओशने थोमस आइपिएलमा डेब्यू गर्दै उच्च प्रर्दशन गर्ने सोचका साथ यूएई पुगेका थिए । तर राजस्थानमा विश्वका उच्च स्तरिय खेलाडीको बाहुल्यता हुँदा कुनैपनि खेलमा मौका पाउन सकेनन् । कप्तान स्टिभ स्मिथ, जस बटलर, जोफा्र आर्चर र बेन स्टोक्स चार विदेशी खेलाडीमा खेलि रहे ।
सुरुवाती समय स्टोक्स टोलीमा नहुँदा टम करनले मौका पाएका थिए । प्रमुख बलर जोफा्र आर्चरको छाँयामा थोमस पर्न पुगे । आर्चरलाई बेन्चमा राखेर थोमसलाई खेलाउन पहिलानै प्ले अफमा पुग्नु पथ्यो । जहाँ आर्चरलाई बिश्राम राखेर मौका दिन सकिन्थ्यो । तर संघर्ष गर्दागर्दै राजस्थान लिग चरणबाट बाहिरिएको थियो ।
१०. फबिएन एलेन (हैदराबाद)
स्पिन अलराउन्डर फबिएन एलेन पनि हैदराबादमा कुनै पनि खेलमा मौका पाउन सकेनन् । हैदराबादमा पनि चार विदेशी खेलाडीमा डेभिड वार्नर, राशिद खान, केन विलियम्सन र जेसन होल्डरले खेल्दै उच्च प्रर्दशन गरे । स्पिनरमा राशिद खान हुँदा फबिएनले कुनैपनि खेलमा मौका पाउन सकेनन् । हैदराबादले अन्तिम खेलको नतिजाले प्ले अफमा स्थान बनाएको थियो । जसले गर्दा आफ्नो उत्कृष्ट चार खेलाडीलाई निरन्तर मैदान उतार्यो । जसमा फबिएन एलेनले मौका पाउन सकेनन् ।
११ .बिली स्टानलेक (हैदराबाद)
अष्ट्रेलिया तीव्र गतिका बलर बिली स्टानलेक पनि हैदराबादको पुरै खेलमा बेन्चमा बसेर फर्किए । हैदराबादको ब्याटिङ कमजोर रहँदा तेस्रो विदेशी खेलाडी अलराउन्डरको रुपमा होल्डरलाई खेलायो । वार्नर, विलिम्सन र राशिदको भने अर्को विकल्प थिएन । अर्कोतर्फ हैदराबादमा भारतीय तीव्र गतिका बलरको बाहुल्यता थियो । टि नटराजन, भुवनेश्वर कुमार सन्दीप शर्मा, सिदार्थ कौल, खलिल अहमद लगायतक तीव्र गतिका बलर हुँदा बिली रोजाईमा थिएनन् ।
खेलेर पनि खेल्न नपाएका डेविड मिलर (राजस्थान)
दक्षिण अफ्रिकी डेविड मिलरले राजस्थानबाट एकमात्र खेल खेल्ने मौका पाएका थिए । दुर्भाग्य पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध शारजाहमा खेलेपनि उनी कुनै बल नेखेल्दै नन स्ट्राइकरमा रन आउट हुन पुगेका थिए ।
उक्त खेलपछि भने उनले राजस्थानमा मौका पाउन सकेनन् । स्टोक्स नहुँदा टम करन खेले । बटलर, स्मिथ र आर्चर पहलो रोजाईमा खेलेका थिए । आक्रामक ब्याटिङका लागि परिचित मिलरलाई राजस्थानले कुनैपनि खेलमा मौका दिएन ।